Kenya waxaa ay lumin doontaa Lamu haddii ay Soomaaliya guuleysato? | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Kenya waxaa ay lumin doontaa Lamu haddii ay Soomaaliya guuleysato?
Warbaahinta Waddanka Kenya ayaa qoraya walaac ay Dolwaddooda ka qabto in ay lumiso qeyb ka mid ah Xeebta Mombasa oo ay hadda ka kalluumeystaan Kalluumeysatada Waddanka Kenya.
Wargeyska Standard Media ayaa maqaal uu arrinkan ka qoray Ciwaan uga dhigay “Kenya waxaa ay lumin doontaa Lamu haddii ay guuleysato Soomaaliya”.
Arrinkan ayuu wargeyska ula jeedaa in ceel dheer ay ku dhaceyso rajada KLalluumeysatada Kenyaanka ah ee xilligan ka kalluumeysta Xeebaha Lamu iyo Badda Soomaaliya ee ay muranka gelisay Kenya.
Goobta ay Muranka gelisay Kenya ee ka tirsan Biyaha Soomaaliya waxaa ay hodon ku tahay kheyraadka kala duwan ee Badda ku jira sida Xawaannada noocyadooda kala duwan eel aga helo Badda iyo kheyraadka Dabiiciga ah sida shidaalka.
Dukumiintiyo ay Maxkmaadda ICJ la wadaagtay Kenya ayaa muujinaya walaaca ay ka qabto in haddii xukunka ICJ dhinaca Soomaaliya u dhoco ay Kenya lumineyso biyaha ay hadda heysato ee ay maraan Maraakiibta iyo Doomaha waaweyn eek u xiranaya Dekadda Mombasa.
Dowladda Kenya waxaa ay sheegtay in haddii xukunka loo rido Soomaaliya ay halkaasi adkaaneyso in ay ka kalluumeystaan Kalluumeysada Kenya oo 80% ku tiirsan kalluunka ay ka helaan dhul badeedka ay muranka geliyeen.
Waxyaabaha ay Kenya ka baqeyso waxaa ka mid ah in ay weyso meel ay Maraakiibta waaweyn u maraan Dekadda Mombasa iyo in Burcad Badeed afduub ka geysato goobta hadda ay doodad ka taagantahay.
Kenya ayaa 11kii Bishan isaga baxday Dacwadda ICJ ee kala dhaxeysa Soomnaaliya kaddib markii ay ku marmarsiyootay in Qareen Soomaali ah uu ka midyahay Garsoorayaasha Maxkamadda ICJ sidoo kalena Caabuqa Covid19 dartiis ay qareenadeeda ku adkaatay in ay tagaan Maxkamadda.
Maxkamadda ICJ ayaa waxaa ay 15kii Bishan billowday dhegeysiga kiiska oo ay Kenya markii 4aad dalbatay in dib loo dhigo hayeeshee ay Soomaaliya labadii maalmood ee la soo dhaafay jeedisay dooddeeda sharciga ah.
Kenya ayaa sheegtay in dacwadda Badda ay u gudbineyso Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobey oo ay xubin ka tahay 10ka dal ee aan heysna kuraasta joogtada ah.
Maxkamadda ICJ ma laha awood fulineed hayeeshee waddamada xubnaha ka ah ee saxiixay ayey qasab ku tahay in ay qaataan go’aannada ay soo saarto.
Kenya iyada oo xubin ka ah waddamada saxiixay heshiiska ay ku dhisantahay ICJ ayey haddana ku dhawaaqday in aysan tixgelin doonin go’aanka ka soo baxa Maxkamadda.
Natiijada kiiska Dacwada ee ka dhaxeeya labada dal ayaa la filayaa in uu soo boxo dhowr bilood kaddib maaddaama dhinac ka mid ah labada dhinac uu diiday ka qeybgalka dacwadda.
Ra'isalwasaare Rooble oo tagay Guriga Tacsida Cali Mahdi
CCW: "Waxaan xog sugan ku helaynaa in CXD loo kala qeybinayo kuwo daacad u ah Farmaajo iyo kuwa laga shakisanyahay"
Bananabaxyo ka dhacaya Muqdisho